သက်တန့်ချို: အုတ်ခဲကျိုး လာမှန်တာကိုစောင့်နေမလား ?
ငယ်ရွယ်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်တစ်ဦးက အိမ်နီးနားချင်းတစ်ဦးနဲ့အတူ ခရီးတစ်ခုကို အတူသွားနေခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ကားမောင်းလာရင်း လမ်းမှာ slow down တစ်ခုကိုတွေ့လို့အရှိန်ကိုလျော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ လမ်းဘေးသစ် ပင်ဘေးမှာ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အရိပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ။ အဲဒီကလေးလက်ထဲမှာ တစ်ခုခုကိုင် ထားတာ လည်း သူတွေ့လိုက်ရတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ slowdown ကို အရှိန်လျော့ပြီးကျော်လိုက်ချိန်မှာတော့ ကားနောက်ပိုင်း တစုံတ ခုက ပြင်းပြင်းထန်ထန် လာရောက်ထိမှန်သံကြားလိုက်ရတယ် .။
ကားအောက်ကို ဆင်းပြီးကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ အုတ်ခဲကျိုးတစ်ခုပစ်ထားလို့ ကားမှန်ကွဲသွား တာကိုတွေ့ လိုက်ရတယ် ။ သူလည်းဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့ သစ်ပင်ဘေး မှာ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ။ ကားမောင်းသမား လူငယ် ဟာ ကောင်လေး ဆီပြေး သွားပြီး ဒေါသတကြီးနဲ့ ဆွဲကိုင် ရမ်းပြီး သူ့ကားဆီ ဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ် ။ “ ဟေးး မင်းမျက်စိမမြင်ဘူးလား ဘာလို့ ငါ့ကားကို ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတာလဲ ဒီကားက အသစ်ကြီးကွ ငွေဘယ်လောက်ကုန်လဲမင်းသိရဲ့လား ” လို့ ဆူပူကြိမ်းမောင်းပြီး ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ ကားတံခါးဆီ ၀ုန်းကနဲဆောင့်တွန်းချလိုက်တယ် ။ ကောင်လေး က ကြောက်လွန်းလို့ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ် ။
“ မဟုတ်ရပါဘူး အကိုကြီးရယ် ကျွန် - - ကျွန်တော် တမင်ပစ်တာမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော့် အစ်ကို ဟိုးရှေ့ မှာလဲကျနေလို့ပါ အဲဒါအကူအညီ တောင်းမလို့ပါ ကားတွေက တစ်စီးမှ ရပ်မပေးလို့ အခုလို အုတ်ခဲ ကျိုးနဲ့ပစ်ပြီးတားလိုက်ရတာပါ ” “ မင်းအစ်ကို ဘာဖြစ်လို့လဲကျနေရတာလဲ ” “ ကျွန်တော့်အကိုက ဒုက္ခိတ ပါ အောက် ပိုင်းသေနေတယ် ၀ှီးချဲတွန်းလာတုန်း လမ်းဘေးမှာ အရှိန်မထိမ်းနိုင်ပဲ ကားလမ်းမပေါ်မှာ လဲကျနေ တယ် သူ့ကိုပွေ့ထူဖို့ကျတော့ကျွန်တော်မနိုင်ပါဘူး ဒီတော့ ကားတွေအရမ်းအရှိန်ပြင်းရင်သူ့ကို ၀င်တိုက် မိမှာစိုးတာရယ် အကူအညီတောင်းပြီး သူ့ကို ၀ှီးချဲပေါ် ပြန်တင်ပေးချင်တာကြောင့်အခုလို လုပ်လိုက်ရတာပါ ” ကောင်လေးက ရှည်လျှားစွာ ရှင်းပြတော့ လူငယ်လေး လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် ။
ချက်ချင်းပဲ ကောင်လေးရဲ့အကိုဆီကို သွားပြီး ၀ှီးချဲပေါ်ပြန်တင်ပေးခဲ့တယ် ။ “ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရယ် ဘုရား က အကို့ကိုစောင့်ရှောက်မှာပါ ” လို့ကောင်လေးက မျက်ရည်တွေကျရင်းပြောလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ သူ့အကိုရဲ့ဝှီးချဲကိုတွန်းပြီးပြန်သွားပါတော့တယ် ။
ဘ၀ကို လျှင်လျှင်မြန်မြန်ကြီးမဖြတ်သန်းလိုက်ပါနဲ့ တခါတရံမှာ တစုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ရပ်တန့်စေချင်လို့ အုတ်ခဲကျိုးကိုင်ပြီးစောင့်နေတာလည်းရှိနေနိုင်တာပဲမဟုတ်လား ။
ဘုရားက ကျွန်တော်တို့စိတ်ကို တိုးတိုလေးပြောတယ် ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားကို တိုးတိုးလေး စကားပြောတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ တခါတရံမှာ ဘ၀ကို လျှင်လျှင်မြန်မြန်ကြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့အတွက် ရပ်နားထောင် ဖို့တောင်အချိန်ရှိပါဘူး ။ ဒီတော့ သူက ကျွန်တော်တို့ဆီကို အုတ်ခဲကျိုးနဲ့ပစ်လိုက်မှာပါပဲ ။
အခုရွေးစရာ ၂ ခုရှိပါတယ် ။
၁ ။ စကားသံတိုးတိုးလေးကို ရပ်ပြီးနားထောင်မလား ?
၂ ။ အုတ်ခဲကျိုး လာမှန်တာကိုစောင့်နေမလား ?
Wait For The Brick အားဆီလျှော်သလိုဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 5:07 PM
ငြိမ်းစိုးဦး May 8, 2012 at 6:44 PM
စောင့်နိုင်ရင် အကျိုးရှိဆိုတဲ့ စကားပုံကို သတိရမိပါတယ် ...
( ချွှင်းချက်တော့ရှိမှာပါ )
ချစ်စံအိမ် May 8, 2012 at 8:51 PM
ဖတ်သွားပါတယ် ဆရာ ဘ၀ကိုပုံမှန်လျှောက်လှမ်းနေပါတယ် :)
ကိုနော် May 10, 2012 at 9:57 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ဒါမျိုးအတွေးပါတဲ့ စာသားတွေများများတင်နိုင်ပါစေ။
mstint May 10, 2012 at 12:24 PM
တစ်ပါးသူအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိတဲ့ တစ်ခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုကို သုံးပြီး
ကားကို ရပ်တန့်အောင် လုပ်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ မောင်သက်တန့်ရေ။
Ven Ghosaka May 11, 2012 at 10:19 AM
ဆရာလည်း ဘဝရဲ့ ပဒိတ်အုပ်နိုင်ပါစေ..
konamazu May 18, 2012 at 10:57 AM
အရမ်းကိုကြိုက်လို့ comment ၀င်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးလေး များများတင်ပေးပါနော်။